Etu ị ga - esi mee Photoshop Camera Camera 3D - LucidPix
Etu ị ga - eme Photoshop Camera Camera 3D
Adobe ewepụtala a ngwa eji emezi oyuyo nke ahụ zuru oke maka ndị chọrọ iji aka ha nwalee foto ha! Igwefoto Adobe Photoshop di nma maka inweta ihe onyonyo gi LucidPix-dị njikere; jiri ngwa ahụ iji bulie foto gị site na itinye ihe nzacha dị iche iche tupu ibubata ha na LucidPix iji mee ha 3D. Na post a blọọgụ, anyị na-enye gị ntuziaka maka nzọụkwụ na igwefoto Photoshop a-ga-esi.
Kwụpụ 1: Mepee igwefoto Adobe Photoshop
Ozugbo ị mepee ngwa ahụ, ị ​​nwere ike were otu foto “dị ndụ” site na ịhọrọ okirikiri ọcha ma ọ bụ họrọ akara ngosi eserese n'aka nri nke gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, anyị họrọ akara ngosi nke eserese ịhọrọ foto site na igwefoto mpịakọta iji dezie. ND TiMỌD:: Anyị nwetara foto anyị @visual program Peeji Instagram!)
Nzọụkwụ 2: Bubata foto ị họọrọ
Ozugbo ahọpụtara ihe onyonyo ịchọrọ ịhazi, ọ ga-egosi na ihuenyo gị ebe ngwa ga-emeziwanye foto gị ozugbo! Chọghị iji aka dị elu, dị ka ngwa na-abawanye saturation, iche, nkọwa na ndị ọzọ. N'ịgbaso nke a, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ịchebe foto ahụ mgbe ngwa hazilachara ya (akara ngosi nke ala) ma ọ bụ họrọ “lenses” (akara ngosi aka ekpe dị ala) ka ọ jiri ihe nzacha na-egwu ya.
Kwụpụ 3: Tinye ihe nzacha na foto gị
Mgbe ịhọrọ akara “Lens”, ọtụtụ ihe nzacha ga-agbago na ala ihuenyo ahụ. Pịgharịa n'etiti ndị a ma tinye ha na foto gị ka ị hụ nke kacha arụ ọrụ! Dịka ọmụmaatụ a, anyị họọrọ iyo “Selestial”, ị nwere ike ịhụ ka etinyere foto anyị n'okpuru. Ozugbo afọ ojuju maka foto edezi gị, họrọ akụ nke na-ehulata iji laghachi azụ na peeji dị n'elu ebe ị nwere ike ịchekwa foto gị.
Kwụpụ 4: Mepee LucidPix
Họrọ akara ngosi igwefoto na ala ihuenyo ahụ iji mbubata foto edezi gị site na Igwefoto Adobe Photoshop ị chekwara na mpịakọta igwefoto gị. Site na ịpị akara ngosi igwefoto na LucidPix, igwefoto igwefoto gị ga-apụta ma ị nwere ike họrọ foto edezi gị.
Kwụpụ 5: Gbanwee foto gị ka ọ bụrụ 3D!
Họrọ akara "3D n'ịdị 3D" ịbụ usoro ngbanwe 3D. Ozugbo ahọtara gi, chere oge ole na ole ka ihe anwansi nke LucidPix rụọ ọrụ. Ọzọ, pịgharịa gaa na ala aka nri iji họrọ usoro mbupụ ọ họọrọ. Dịka ọmụmaatụ a, anyị kpebiri mbupụ onyonyo a ka ọ bụrụ "3D Video". Ozugbo ahọpụtara nke a, ị nwere ike họrọ nghazi nke vidiyo XNUMXD gị! Họrọ site na Orbit, Zoom, slide na Square. N'ikpeazụ, họrọ “Chekwa vidiyo” mgbe ịmechara.
Kwụpụ 6: Nwee igwefoto ọhụụ Adobe Photoshop & LucidPix 3D!
You nwaleela otu a-esi eduzi iji gbanwee foto gị igwefoto Adobe Photoshop ka 3D? Kpido anyị maka ohere iji gosipụta anyị Instagram!
5 Atụmatụ iji nọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ →← Ndụ foto dị na 3D